Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ)
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Nexium® 24Hrကိုအစာမကြေရင်ပူခြင်းမကြာခဏ (တပတ်လျှင် ၂ရက်၃ရက်) ဖြစ်ပွားတတ်သူတွေမှာကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ချက်ချင်းသက်သာဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အာနိသင်အပြည့်ရအောင် ၁ရက်မှ ၄ရက်လောက် သောက်သုံးရပါတယ်။
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
မနက်ပိုင်းအစာမစားခင် ဆေးတတောင့်ကိုရေတဖန်ခွက်အပြည့်နဲ့ သောက်သုံးပါ။
ဆေးတတောင့်လုံးကိုတခါတည်းနဲ့ သောက်ချပါ။ ဆေးကိုချေခြင်း၊ ဝါးစားခြင်း မပြုပါနဲ့။
ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ ၁၄ရက်ထက် ကျော်ပြီးမသုံးပါနဲ့။
၁၄ရက်တာ ကုသမှုကိုထပ်မံပေးခြင်း (လိုအပ်ပါက)
၁၄ရက်တာကုသမှုကို ၄လကြာတိုင်းမှာ ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်မညွှန်ဘဲ ၁၄ရက်ထက်ကြာပြီး (သို့) ၄လတခါထက်ပိုပြီး သုံးစွဲခြင်းမပြုပါနဲ့။
အသက် ၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုမေးပါ။
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Nexium® 24Hr ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရပါ။ Nexium® 24Hr ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခြင်းမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Nexium® 24Hr ကိုအိမ်သာတွင်းထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Nexium® 24Hr တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Nexium® 24Hr ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာအသုံးပြုရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနဲ့ ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Nexium 24Hrဟာအောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nexium® 24Hr ဟာသင်ယခုသောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
ဒီဆေးဟာ အောက်ပါဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Warfarin, clopidogrel (သို့)cilostazol (သွေးကျဲဆေးများ)
Tacrolimus (သို့)mycophenolatemofetil (ကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်သောဆေး)
HIV ရောဂါပိုးအတွက် ဆေးဝါးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Nexium® 24Hr ဟာအစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nexium® 24Hr ဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃လထက်ကြာပြီးအစာမကြေရင်ပူခြင်း (ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၈နှစ်နှင့်အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ
တနေ့တကြိမ်နဲ့ ၁၄ရက်ဆက်တိုက် သောက်ပေးရပါတယ်။ အာနိသင်ပြဖို့ ၁ရက်မှ ၄ရက်ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Nexium 24Hr (နက်စ်စီယမ် ၂၄နာရီ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Nexium® 24Hr ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊အချိုးအစားများနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်
Nexium® 24Hr ဆေးကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။
Nexium® 24Hr. https://www.nexium24hr.com/us/tablets. Accessed October 13, 2017
Nexium® 24Hr. http://reference.medscape.com/drug/nexium-nexium-24hr-esomeprazole-341998. Accessed October 13, 2017